बालबच्चा र अभिभावकको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्दछ । उनीहरुलाई अभिभावकहरुले आफ्नो राम्रो हेरचाह गरेको र उनीहरुले के गरिरहेका छन् त्यसबारे चासो राखेको आभास दिनु पर्दछ । बाबुनानीहरुसँग कुराकानी, आपूm मात्रै नबोल्नुहोस् । दोहोरो कुराकानीको बाटो खुल्ला राख्नुहोस् । उनीहरु के भन्दै छन् त्यसतर्फ ध्यान दिनुहोस् । तपाईंसँग सबै कुराको उत्तर नहुन नि सक्छ । उनीहरुलाई होच्याएर कुरा नगर्नुहोस् । जीवन र लागू औषधबारे उनीहरु कति धेरै कुरा जान्दछन् भन्ने थाहा पाउँदा आश्चर्य पर्नुहुन्छ ।
छलफल नै समाधानको सर्वेत्तम् उपाय हो
चनाखो रही शारीरिक हाउभाउतर्फ ध्यान पु¥याउनुहोस् । बालबालिकाले हँसिलो अनुहार बनाएर नआत्तिईकन सहज कुराकानी गरेता पनि तिनको खुट्टा थर्थराउने वा काँप्ने वा औँलाले टेबलमा बजाउने थवा आँखा नजुधाई शिक्षा निहु¥याएर बोल्ने जस्ता अस्वाभाकि शारीरिक क्रियाकलाप देखाएमा तुरुन्त स्कुलका सम्बन्धित शिक्षासँग कुराकानीगर्नुपर्दछ ।
बालबालिकाहरुलाई जिम्मेवारीको आभास गराउनुहोस्
जिम्मेवारीबारे जान्न बालबालिकाहरु कहिल्यै कलिला हुँदैनन् । उनीहरुलाई घरमा गृहकार्यहरु दिनुहोस् । उमेर बढ्दै जाँदा काम पनि त्यसै अनुरुप बढाउँदै जानुहोस् । आपूmहरुले कुनै प्रकारको गैरकानुनी) लागू औषध सेवन नगरी असल उदाहरण दिनुहोस् । मैले भने जस्तो गर, मैले गरे जस्तो होइन जस्ता व्यवहार देखाउँदा बालबालिकाले आफ्नोअभिभावकप्रति सम्मान गुमाउँदै जान्छन् ।
लागू औषध वा औषधीको गलत प्रयोग नगर्नुहोस्
तपाईंलाई तनाब, लगातार टाउको दुखेको अवस्थामा निवारणको लागि के गर्ने गर्नुहुन्छ ? डाक्टरी दबाई वा अन्य केही लिनुहुन्छ ? यदि हो भने तपाईं सजिलै यस्ता दबाई वा रक्सीको लतमा ब्ममष्अतक० पर्न सक्नुहुन्छ । लागू औषध (गैरकानुनी औषधी) लिनु यस्ता दुखाइका समाधानका उपाय होइनन् । समाधानको सही छनौट गर्नुहोस् । याद राख्नुहोस्य दि तपाईं रक्सी, लठ्याउने दबाई, गू औषध आफ्नो तनाब कम गर्न वा हटाउन लिनुहुन्छ वा त्यसमा भर पर्नुहुन्छ भने तपाईं आफ्ना बालबालिकालाई गलत काम सिकाइरहनु भएको छ । सन्तुलित भोजन लिनुहोस्, पूmर्तिलो रहनुहोस् । खेलकुद पनि तपाईंको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा सुधार गर्नका लागि उचित उपाय हुन्छ, जसले तपाईंलाई मद्दतपु¥याउने छ ।
सधैं जानकार रहनुहोस्
कस्ता खाले लागू औषध र तिनीहरुको स्रोत गैरकानुनी हो भन्नेबारे जानकारी राख्नुहोस् (Cocaine, crack, opium, marijuana, heroin / amphetamines) जस्ता लागू औषधको खतरा, ानीबारे र तिनीहरुको कसरी मानिसहरुलाई असर पु¥याउँछन् भन्नेबारे जानकारी ाख्नुहोस् । त्यसपछि तपाईंका बालबालिकाहरुले ही छनौट गर्न तपाईंबाट सहयोग प्राप्त गर्नेछन् । यसो गर्नाले बालबालिकाहरु यस्तो लागू औषध लिनु नेको कानुनी हो भन्नेबारे जान्दछन्, लागू औषधसँग सम्बन्धित अपराधमा पक्राउ परेमा कानुनी कारबाही हुने, जेल जानुपर्ने तथा बेइज्जत हुनुपर्छ भनेर चेत हुन्छन् ।
लागू औषध बिक्रेताहरुबाट जोगिन बालबालिकाहरुलाई मद्दत पु¥याउनुहोस्
बालबालिकाहरुलाई लागू औषध बिक्रेताहरुको चिन्न र तिनीहरुको कारोबार गर्ने सम्भावित स्थलहरुको बारेमा जानकारी गराई मद्दत पु¥याउनुहोस् । बिक्रेताहरुले बालबालिकाहरुलाई लागू औषध सेवन गर्नाले राम्रो अध्ययन गर्न सक्ने र परीक्षा पास गर्न मद्दत पुग्ने जस्ता गलत कुरा भन्दछन् । एकपल्ट चाख्दैमा तिमी यसको लतमा फस्दैनौ, चाखी हेर, जस्ता कुरा गरी प्रोत्साहित गर्न सक्छन् । तर तपाईंका बालबालिकाले यस्ता सुझावहरु बेवास्त गरुन् किनकि लागू औषधले भिन्न भिन्न व्यक्तिहरुमा भिन्न भिन्न खाले नराम्रो असर गर्दछ । बालबालिकाहरुलाई लागू औषधलाई “नाइँ वा हुँदैन” भन्न सक्ने बनाउन मद्दत गर्नुहोस् । उनीहरुलाई खेलकुद, अन्य रुचि वा आफ्नो फुर्सदको समयमा कसरी सृजनाशील कामहरु गर्ने भन्ने कुरामा प्रोत्साहित गर्नुहोस् ।
लागू औषध सेवन गरेको लक्षणहरुबारे सजग रहनुहोस्
कुनै कारणवश तपार्ईंको बाबुनानीमा शारीरिक वा भावनात्मक लक्षण लागू औषध प्रयोग गरेको जस्तो देखिन सक्छ तर आफ्नो बाबु कुलततिर छ भन्ने शङ्काका भरमा तुरुन्त निष्कर्षमा नपुग्नुहोस् । किनभने तपाईंको बाबुले देखाएको लक्षणहरु अन्य कुनै कारणबाट पनि भएका हुनसक्छ तसर्थ तपाईंको बाबुनानीमा निरन्तर निगरानी राख्नुहोस् । निम्न लक्षणहरु लागू औषध प्रयोगकर्तामा देखिने लक्षणहरु हुन् ।
भावनात्मक तथा सामाजिक लक्षणहरु (Emotional and Social Signs)
आफ्नै सुरमा रहने, उत्तेजना, रिस, उदण्ड, नैराश्यताका लक्षणहरु पटकपटक देखिने ।
लगातार झुटो बोल्ने तथा चोरी गर्ने ।
लागू औषधको नराम्रो (नकारात्मक) असरलाई थाहा नपाए जस्तो गर्ने ।
बानी व्यवहारमा परिवर्तन देखिएका कुरा बताउँदा आपत्ति जनाउने, साथीभाइलाई र आफन्तहरबाट टाढा हुँदै जाने ।
गोप्य रुपमा टेलिफोन गर्ने ।
तपाईंसँग (अभिभावक) भेट गर्न वा बोल्न नरुचाउने, भिन्न खालका मित्रहरु बनाउने वा सङ्गत गर्ने ।
त्यस्ता व्यक्तिहरुको ठेगाना वा जानकारी नदिने ।
प्रेरणा ९ःयतष् खबतष् यल० मा कमी आउने ।
दैनिकी (दैनिक जीवन) मा रुचि नदेखाउने ।
जानकारीविना स्कुल÷कलेजमा अनुपस्थित हुने ।
शारीरिक लक्षणहरु (Physical Signs)
लठ्ठ परिरहने (निदाए जस्तो) ।
काँपीरहने (कम्पन हुने) ।
रातो आँखा, आँखाको नानी रसिलो धमिलो जस्तो देखिने ।
व्यक्तिगत सरसफाइ तथा व्यक्तित्वमा रुचि कम हुने (कपडा मिलाएर नलगाउने) ।
लर्बराउने खालको बोली हुने ।
खानाको रुचिमा परिवर्तन हुने (कहिले एकदमै बढी खाने कहिले खानै मन नगर्ने) ।
अनियन्त्रित हिँडडुल (बिना कारण)
आँखामुन्तिर कालो देखिने ।
सुत्ने बानीमा अनियमितता देखिने ।
बारम्बार खोकी र चिसोले सताउने ।
शरीरको तौल घट्दै जाने ।